अब एमसीसी खारेज गरे नेपालको इतिहासमा हिरो बन्नेछन् प्रधानमन्त्री ओली - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सोमबार, असार १ २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । फाइल तस्विर ।
हिजो ४ बजे बैठक बस्ने भनिएतापनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा बैठक स्थगत गरिएको थियो । यसरी बैठक स्थगन गरिएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअगाडी पनि प्रम ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै एमसीसीको लागि बस्ने भनेको नेकपा सचिवालयको बैठक स्थगत गरिएपछि शंकाको दृष्टिबाट हेर्न थालिएको छ ।
संसदको यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर टुङ्गो लगाउन नेकपामाथि दबाव छ । पार्टीभित्र एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्ष हाबी छ ।
. भीम रावलले ओलीलाई भने : ‘म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर झैं नगर्नुस्’
. हिजो मेराे खुट्टा तान्नेहरू अहिले प्रधानमन्त्रीको खुट्टा समाइरहेका छन् : ओली
. अरूका नाति नातिनीलाई बरबाद गरिदिने प्रचण्डका दुई नातिनी बेलायत पढ्छन्, खुसी लाग्छ: केपी ओली
. कांग्रेस होसियार ! प्रचण्डले सिध्याउलान् : केपी ओली
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, असार १ २०७७ ०८:२७:१५
Tags :एमसीसीकेपी शर्मा ओली